Petrochemical-Petrochemical-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Ny solika sy ny entona voajanahary no akora fototra amin'ny indostrian'ny petrochemical.
Ny refinera dia mitsabo ny solika amin'ny solika amin'ny alàlan'ny famakiana rano mafana ary mamokatra solika misy tsiranoka misy hakitroka, fananana ary vokatra farany.
Ny entona voajanahary, aorian'ny fanivanana sy fanodinana azy farany, mba hampihenana ny fanarenana sy fanalana ireo zavatra tsy ilaina, miaraka amin'ny solika dia eo am-pototry ny indostrian'ny Petrochemical ary na dia misy aza ny dingana sarotra sy manokana dia manova ny menaka sy gazy manta ho lasa simika biolojika na akora simika.
Titan dia afaka manome karazana valizy isan-karazany izay ilaina amin'ny fanadiovana sy fampiharana petrochemical izay matetika misy hafanana ambony, fanerena avo, serivisy maloto ary ranoka mahery setra.
Ny haben'ny valizy Titan dia manomboka amin'ny 1/2 "ka hatramin'ny 24" ary ny kilasin'ny tsindry avy amin'ny 150 # ka hatramin'ny 2500 #, ny akora manomboka amin'ny vy karbaona sy vy tsy metaly mba hanomezana fahafaham-po ny Ni-Alloys sy Titanium be pitsiny indrindra.
Amin'ny alàlan'ny fahaiza-mamatsy sy serivisy tena tsara dia lasa mpamatsy mahay ny orinasan-tsolika lehibe maro eo amin'ny tsena anatiny sy iraisam-pirenena ary manana kalitao voaporofo amin'ny tetikasa fanadiovana lehibe maro.